Semalt Inotsanangura Kuti Ungawana Sei Site Yako Pashure Kokurwisa Kuipa
Chiitiko chinonyanya kushamisika kune muridzi wepaiti chirwere chinotyisa chemashizha avo.Mune mamiriro ezvinhu, vateereri vanokurudzirwa kuti varambe vakadzikama uye zvakakodzera kuita zviito zvakakodzera. Frank Abagnale, the Semalt Mutevedzeri Mukuru weMutengi weMutengi, anopa matanho ekugadzirisazve nzvimbo inopfigirwa. Handeyi!
Chekutanga, chengetedza kombiyuta yako kune chero mavairasi - allerg 3 caps. Iyi inhanho yekugadzirira inobatsirakuti usabvisa mikana yekuve nekombiyuta yako sechikonzero chekurwisa usati watanga kuwana nzvimbo yacho. Pamusoro pechinyorwa ichi, saka, kuverengakombiyuta yenyu yepachipatara kune zvirwere, malware kana mavairasi inofanira kunge iri danho rekutanga. Muenzaniso wekurudzirwa utachiona hunonzi EU-Cleanerkubva Anti-Botnet consulting centre, Germany. Icho chinobatsira nzvimbo yekugadzira webhusa kubvisa chero malware pasina mahwendefa. Uyezve, izviconsulting centre inotumira nhamba yetikiti uye inosangana nedhidhiyo kuburikidza nemeyili kumudzidzi webhusaiti kana pane hacked site.
Chechipiri, chero mutori wepasipurasi anofanirwa kuchinjwa. Ndiyo danho rinoita kuti vatengesi vadzikehaikwanise kuwana database yako, webhusaiti kana webhupu. Pasiwedi inogona kutarisirwa kubva kune web hosting service customer nzvimbo uye admin chikamuye site. Uyezve, kuchengetedzwa kwephasiwedi kunogona kusimbiswa nekuwana nzvimbo yehutaneti kuburikidza nenzira dzekuchengetedzwa kwezvokuchengetedza dzakadai saKachengetedzwa Kwefaira DheyoProtocol (SFTP), kushandura mapepa emamwe mapeji mune mamwe mabasa uye kusarudza mapepa epasi akachengeteka. Mamwe mazwi haafaniri kushandiswa seadmin passwords for web security.
Chechitatu, shandisa phpMyAdmin kugadzirisa zvakare webhusaiti yako password..Kana muridzi wepaiti asingakwanisikuti vopinde mubatiro remitemo yesaiti yavo, vashandi vangave vakashandura password kana kuti vakamisa iyo account. Muchiitiko ichi, thepasi passwords mu databases inofanira kuchinjwa. Izvi zvinogona kuwanikwa kuburikidza nekushandiswa kwe phpMyAdmin kune vashandisi vachishandisa WordPress.
Kukuvara kunofanira kuongororwa mune danho rinotevera rekuwanazve nzvimbo yakatorwa. Inosanganisirakuongorora mamiriro ezvinhu uye kuronga kuti ungaenderera sei. Sarudza mafaira ane utachiona, chero kupi zvako kunoenderana nehana yakaoma, uye kuwanikwaiyo database uye kana mamwe masayiti pa web server yako akanganiswa. Iyo nzira inogona kuitiswa nekushandiswa kweGoogle Webmaster Tools.
Zvadaro, dzorera zvakare kuchengetedza uye chengetera ye malware. Munhanho iyi, muridzi wepaiti anofanirashandura chero mapepa akakanganiswa ane bhuku risina kuwanikwa reefaira. Uyezve, dheedheni inofanira kudzorerwa kubva pakachengetedza kana zvichiitakuti vatengesi vanowanikwa kune database havagoni kuiswa kunze. Ingoyeuka, mabhakitiri maviri maviri anokosha ndi Joomla uye WordPress.
Ongorora zvinyorwa, mapaji, zvinyorwa uye maitiro. Vanokanganisa vanowanzoshandisa kuchengetekamabira muzvinyorwa, plugin, uye themes. Nokudaro, nokukurumidza kana zvipembenene zvave zvadzorerwa, mabheji ose anozivikanwa anochengetedzwa anofanira kunge akavharwa nekuvandudzazvinyorwa zvose, zvinyorwa, uye maitiro. Chimwe chepauguru chinokanganisa kuchengeteka kwesaiti.
Pakupedzisira, shanda kubvisa chimbo kubva kune vanyori. Yahoo, Google, uye Bing kuchengetavanhu vakaderera kune nzvimbo dzinotapukirwa nemavirusi. Chero nzvimbo yepaiti yakaiswa paGoogle mutsvuku, somuenzaniso, inorangwa nechezasi kana kuti yakabviswakubva pakutsvaga index. Nokudaro, mushure mokunge mabhizinesi akachena uye kuchinja mapepawedi, zivisai injini dzekutsvaga kuti dzibviswa kubva kune mavara.
Mukupedzisa, kurwiswa kune zvivako kune chikamu chenyika yemazuva ano yemaawa. Kana siteinodedera, vashanduri vangave vachinzwa kushamiswa. Panguva ino, zvakakosha kuti urambe wakadzikama kubva iwe zvino unoziva kuti ungaitei uye nekubudirira uchidzokawebsite.